Qarax miino oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan AMISOM – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaQarax miino oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan AMISOM
Hiiraan Xog, Ciidamada Amisom ayaa laba qarax oo miino ah waxaa lagula eegtay agagaarka Warshadii hore ee Baastada Degmada Yaaqshiid sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen.
Qaraxyadan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa wadada dhinaceeda ku aasnaa, waxaana halkaasi maraayay Kolonyo gaadiidka Amisom.
Qof deegaanka ah ayaa Warbaahinta u sheegay inuu maqlay jugta Xoogan ee qaraxyada, balse uusan garan karin inta uu la eeg yahay Khasaaraha Ciidamada Amisom qaraxyadaasi ka soo gaaray.
“Qaraxyada Ciidamada Amisom ayaa lala eegtay agagaarka Warshada baastada ayaga oo maraayo meeshaan dhawr mar ayeey wax ka dhaceen oo qarax ah oo Amisom lala eegtay.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka.
Ciidamada Amisom, ayaa qaraxyada markii halkaasi lagula eegtay kadib isaga dhaqaaqay, waxaana goobta gaaray Ciidamada Booliska dowladda Soomaaliya.
Lama oga khasaaraha Ciidanka Amisom qaraxyadaasi ka soo gaaray iyo sida ay wax u dhaceen.